Vaovao - Fizarana fitaratra fitaratra fibre 2021 fanadihadiana ataon'ny firenena ambony, angovo firoboroboan'ny indostria, vola miditra, haben'ny tsena isaky ny vinavinam-paritra hatramin'ny 2024 miaraka amin'ny taha mitombo lehibe
Fiberglass voatetika kofehy Mat
Tapezy fametahana tena
Fiber Glass Mesh Market 2021 Fanadihadiana fitomboan'ny firenena ambony Data, fironana indostrialy, vola miditra, haben'ny tsena araka ny vinavinan'ny faritra hatramin'ny 2024 miaraka amin'ny tahan'ny fitomboana miavaka
Famaritana fohy momba ny tsenan'ny Fiber Glass Mesh: volon'osy fiberglass vita amin'ny kofehy vita amin'ny cribrecross, izay ampiasaina hamoronana vokatra vaovao toy ny kasety sy ny sivana. Rehefa ampiasaina ho toy ny sivana izy io, dia tsy fahita firy ny mpanamboatra manaparitaka ny firakotra PVC hampatanjaka sy haharitra kokoa.
15 Des 2020 (The Expresswire) - Global "Fiber Glass Mesh Market" 2021-2024 Research Report dia manome famakafakana lehibe momba ny toetoetran'ny mpamokatra Fiber Glass Mesh miaraka amin'ny zava-misy sy tarehimarika, dikany, famaritana, famakafakana SWOT, hevitry ny manam-pahaizana ary ny fivoarana farany manerantany. Ny tatitra dia mikajiana ny haben'ny tsena ihany koa, ny Fiber Glass Mesh Sales, ny vidiny, ny vola miditra, ny march Gross ary ny Share Market, ny firafitry ny vidiny ary ny tahan'ny fitomboana. Ny tatitra dia mihevitra ny fidiram-bola azo avy amin'ny varotra Ity tatitra ity sy ny haitao amin'ny alàlan'ny fizarana fampiharana isan-karazany ary ny tabilao sy ny tarehimarika fizahana ny tsena miparitaka amin'ny 117 pejy sy TOC lalina amin'ny Fiber Glass Mesh Market.
COVID-19 dia mety hisy fiantraikany amin'ny toekarena manerantany amin'ny fomba telo lehibe: amin'ny fiatraikany mivantana amin'ny famokarana sy ny tinady, amin'ny famoronana rojom-bidy sy ny fikorontanan'ny tsena ary amin'ny fiantraikany ara-bola amin'ny orinasa sy tsena ara-bola.
Ny tatitra farany dia hanampy ny famakafakana ny fiantraikan'ny COVID-19 amin'ity orinasa ity.
MBA HAHAFANTARO NY FOMBAN'NY COVID-19 NO HATONGAINA AO AMIN'IZANY TANTARA IZAO - SAMPLE REHETRA
Ny tanjon'ny fandinihana dia ny mamaritra ny haben'ny tsena amin'ny fizarana samihafa sy ny firenena tamin'ny taona lasa ary haminavina ny sanda amin'ny dimy taona manaraka. Ny tatitra dia natao hampidirana ny lafiny kalitao sy ny refy amin'ny sehatry ny indostria momba ny faritra sy ny firenena voakasiky ny fanadihadiana. Ankoatr'izay, ny tatitra dia manome ihany koa ny fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny lafin-javatra lehibe toy ny mpamily sy ny antony manakana izay hamaritana ny fitomboan'ny tsenan'ny Fiber Glass Mesh amin'ny ho avy.
Sehatry ny tsenan'ny vera fibre:
Tamin'ny taona 2010, GlassFibreEurope dia nilaza fa ny orinasa sinoa Chongqing Polycomp International Corp., Jushi Group ary New Ch Shanghai Group dia nanary roving fiberglass be dia be, tsy voadidy, kofehy, kofehy ary tsihy tao amin'ny tsena eropeana tato anatin'ny taona vitsivitsy. Mandritra izany fotoana izany, ny EU dia manomboka manohitra ny fanariana fanariam-pako vita amin'ny lamba vita amin'ny fibre vera avy any Shina. Ireo mpanondrana lehibe an'ny Fiber Glass Mesh toa an'i Yuyao Mingda Fiberglass Co. Ltd, Grand Composite, Jiangsu Tianyu Fiber Co. Ltd dia niditra an-tsehatra. Ity hetsika ity dia niantraika mafy tamin'ny orinasan-jaza fiberglass harato.
Dimy taona taty aoriana, Tao amin'ny fiaraha-miasa mavitrika ny Association Glass Fiber China Glass, Association Association Composites China, Ningbo City Council, ny orinasa fibre fitaratra Ningbo nanasa an'i Jiangsu, Shandong sy ireo toerana hafa 16 orinasa lehibe fitaratra lehibe tonga tao Ningbo, ny lamba fitaratra vovo-kazo EU fanadihadiana momba ny raharaha anti-dumping fanadihadiana ny raharaha mba hahazoana marimaritra iraisana.
Noho ny ambaratonga fidirana indostrialy ambany dia maro ny mpamokatra any Shandong, Hebei, Zhejiang, Jiangsu ary toerana hafa any Shina manana fahaiza-manao lehibe ary vidiny tena mora. Izy ireo dia mamokatra kalitao maloto vita amin'ny vera, manelingelina ny fampandrosoana ara-pahasalamana ny indostria, taona vitsy lasa izay, ary ny indostria any Shina dia hampisy fifaninanana milamina kokoa.
Ny tsena manerantany ho an'ny Fiber Glass Mesh dia antenaina hitombo amin'ny CAGR sahabo ho 3,4% mandritra ny dimy taona ho avy, hahatratra 571,6 tapitrisa USD amin'ny 2024, avy amin'ny 482,6 tapitrisa USD amin'ny taona 2019, araka ny fanadihadiana natao tamin'ny New Research.
Ity tatitra ity dia mifantoka amin'ny Fiber Glass Mesh eo amin'ny tsena manerantany, indrindra any Amerika Avaratra, Eoropa ary Azia-Pasifika, Amerika atsimo, Moyen Orient ary Afrika. Ity tatitra ity dia manasokajy ny tsena miorina amin'ny mpamokatra, faritra, karazany ary fampiharana.
Makà santionany amin'ny tatitry ny tsenan'ny Fiber Glass Mesh 2020
Tatitra bebe kokoa momba ny fivoaran'ny tsena sy ny fironana amin'ny Fiber Glass Mesh amin'ny ho avy manerana izao tontolo izao. Izy io koa dia manaparitaka ny fizarazaran-tsena Fiber Glass Mesh amin'ny karazany sy amin'ny alàlan'ny Applications mba hikarohana feno sy lalina ary hanambara ny mombamomba ny tsena sy ny vinavina.
Ny fanasokajiana lehibe dia toy izao:
● Ny hafa
Ny fampiharana lehibe dia toy izao:
● Fanamafisana ny rindrina ivelany
● Tsy tantera-drano
Raha ny ara-jeografika, ity tatitra ity dia mizara ho faritra lehibe maromaro, miaraka amin'ny varotra, fidiram-bola, fizarana tsena ary fitomboan'ny tahan'ny Fiber Glass Mesh any amin'ireny faritra ireny, ny taona 2014 ka hatramin'ny 2024, mandrakotra
● Amerika Avaratra (Etazonia, Kanada ary Mexico)
● Eoropa (Alemana, UK, France, Italia, Russia ary Torkia sns)
● Azia-Pasifika (Sina, Japon, Korea, India, Aostralia, Indonezia, Thailand, Filipina, Malezia ary Vietnam)
● Amerika atsimo (Brezila, Arzantina, Columbia sns)
● Moyen Orient sy Afrika (Arabia Saodita, UAE, Egypt, Nizeria ary Afrika Atsimo)
Ity tatitra momba ny fikarohana / fanadihadiana amin'ny tsena Fiber Glass Mesh ity dia misy valiny amin'ny fanontanianao manaraka
Building A, Zijingguandi, Distrikan'i Qiaodong, Tanànan'i Xingtai, Faritanin'i Hebei
© Copyright - 2005-2021: Voatahiry ny zonao rehetra.